अनुहारमा कनिका जस्तो सेतो, पहेंलो रङको दाना किन आउँछ ? उपचार के हो? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/अनुहारमा कनिका जस्तो सेतो, पहेंलो रङको दाना किन आउँछ ? उपचार के हो?
यस वर्ष कै धेरै उथलपुथल भयो सुनको भाउमा,यसरी खस्किदै छ मूल्य।मसान्तसम्म नसोचेको भाउ प्रति तोला